Isku aadka Koobka Qaramada Afrika oo la sameeyay | Berberanews.com
Home CAYAARO Isku aadka Koobka Qaramada Afrika oo la sameeyay
Isku aadka Koobka Qaramada Afrika oo la sameeyay
Xulka difaacanaya koobka ee Cameroon ayaa ku jira Group F waxaana ay ku wada dheeli doonaan Ghana, Benin iyo Guinea-Bissau.
Tartanku waxa uu bilaaban doonaa 21 Juun waxa uuna dhammaan doonaa 19 July, taas oo ka dhigan in ciyaartoyda ka dheesha qaaradda Yurub aanay ka maqnaan doonin ciyaaraha kooxaha ay u dheeleen maadaama fasaxii sanadka lagu jiro.
Tartankan oo ka dhici doona dalka Masar ayaa noqonaya midkii ugu weynaa oo waxaa ka qeyb qaadanaya 24 kooxood, waana midkii ugu horreeyay ee la qabto xilliga xagaaga ee qaaradda Yurub iyadoo markii hore la qaban jiray bilaha Janaayo iyo Febraayo.
Ciyaarta koobaad ee tartanka waxa ay dhexmari doontaa Masar iyo Zimbabwe 21 bisha Juun waxa ayna ka dhici doontaa garoonka ciyaaraha ee Qaahira.
Sidan ayey xulalku isugu beegmeenn
Group A: Masar, DR Congo, Uganda, Zimbabwe
Group C: Senegal, Aljeeriya, Kenya, Tanzania
Previous articleIlhan Cumar oo ku tilmaantay hadallo loo adeegsaday “kuwa halis ah oo kicinaya dadka”
Next articleXil Qabte kastaa Dhac Hadoodilan ayuu u yahay Awdal iyo Gobolada dalka, Hargaisa iyo dadkeedana 85% Dan iyo munaaficaad